Shatiga & Shuruudaha Adeegsiga
www.almancax.com Shuruudaha isticmaalka
Dhammaan koorasyada Jarmalka ee ku qoran koorsada luqada Jarmalka waxaa na soo qoray annaga iyo xuquuqda oo dhan.
Waxaad u isticmaali kartaa dukumiintiyada qorista boggayaga kaliya illaa intaad ku xiran tahay boggayaga.
Kaararka, tarjumida koorsooyinkayaga isla qaab ama noocyo kale oo ku daabacan wax kasta oo dhexdhexaad ah waa ka soo horjeeda sharciyada copyright.
Koorasyada muuqaalka ah ee laga heli karo boggayaga ayaa lagu daabacan karaa boggayaga oo leh fasax qoraal ah oo soo saaraha soo saaraha iyo daabacaadda, iyo kooxdayda waa liisanka. Waxaad isticmaali kartaa tababbarada fiidiyowga kaliya inta aad ku xiran tahay boggayaga.
Ma lihid xuquuqda aad u leedahay inaad nuqul ka qaadato, soo dejiso, oo aad wax ka beddesho fiidiyadaha koorsada iyada oo aan wax laga beddelin ama wax ka beddeleynin dhexdhexaadin kasta.
Ma koobi gareysan kartid ama kuma qeybin kartid shey kasta oo boggan ku jira, xitaa qeyb ahaan.
websaydhka almanx.com waa websaydh loo sameeyay in dadka lagu wargaliyo isla markaana macluumaad sax ah oo la isku halleyn karo laga helo internetka. Macluumaadka, faallooyinka iyo talooyinka, su'aalaha iyo jawaabaha la siiyo websaydhka ma daboolaan talo sharciyeed. Sidaa darteed, sameynta go'aanno kala duwan oo ku saleysan macluumaadka ku qoran halkan waxaa laga yaabaa inaysan u horseedin natiijooyin ku habboon filashooyinkaaga. Dhammaan waxyaabaha ku yaal bartayada ayaa leh xuquuqda daabacaadda annagaba. Waa mabnuuc in la nuqulo, la daabaco, la daabaco, la daabaco ama la isticmaalo wax ama dhammaan qodobbada ku yaal boggayaga ujeeddo kasta ha noqotee. Kuwa ku guuldaraysta inay u hoggaansamaan mamnuucitaankan waxaa loo qaadan doonaa inay aqbaleen mas'uuliyadda dambiga iyo culeyska maaliyadeed iyo magdhawga maaliyadeed iyo niyadeed ee diyaarinta websaydhka kahor.
Waad ku mahadsantahay xiisahaaga sharci iyo xuquuqda daabacaadda.